Okwamanje, impikiswano ebalulekile ndlela lapho entela intela lezemihlaba kumele zigcwaliswe. Kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ubani obangele ukukhokhwa kwezintela. Abathandwayo futhi into enjalo: ngubani banikele umhlaba intela isimemezelo ku saziso? Noma yikuphi ukungabaza ngale ndaba angasusa, yebo, Federal Tax Service. Manje usekulungele ukunikezela ifomu ebuyekeziwe memezelo okuphathelene wentela yomhlaba. Leli fomu sivunyiwe ngoNovemba 2011.
Ukudalulwa kokuhlomula wentela yomhlaba, ngokuvamile has a ikhava ishidi nezigaba ezimbili. Okokuqala - lokhu esigabeni ekubhekaneni nenani lentela umhlaba, ekhokhwa nesabelomali. Ngokuqondene yesibili, kuba ukubala base yentela. Akuyona imfihlo ukuthi isimemezelo sentela izwe ligcwele e bentela endaweni bezwe.
Lo mbhalo kumele igcwaliswe zonke izintela, kungakhathaliseki ibaphi abantu noma izinhlangano. Yena ligcwaliswe kulabo iziza umhlaba ezisebusweni ubunikazi yabo. Lokhu kusebenza futhi izindawo ngaphansi imigomo yokusetshenziswa esiphakade komhlaba ngenhloso yebhizinisi.
Uma ufuna ukubuya sakho sentela i-intela umhlaba wagcwala yonke imithetho, kufanele kuqala uzijwayeze ezinye izinhlelo zokusebenza ukuthi kukhona omunye izingxenye oda. Lichaza izidingo eziyisisekelo kanye nemiyalelo njengoba entela yentela lezemihlaba kumele zigcwaliswe.
Ngakho, yini okufanele zibonakale kuwo?
Okokuqala, kukhona kumele kuboniswa amakhodi ukuthi ukunquma inkathi intela. Okwesibili, amakhodi amafomu esifanele kabusha nokuqedwa inkampani. Ungakhohlwa mayelana amakhodi, okuyinto zibhaliswe entela.
Okwesithathu, ungakhohlwa mayelana lwemibhalo, okuyinto ichaza izigaba komhlaba kanye zentela amakhodi.
Ngokusho zonke izimiso zayo neziqondiso, izinkomba, okuyinto ziyabonakala esimemezelweni elicacisiwe ruble lonke. Uma une amanani esingaphansi amasenti amahlanu noma ilingane nabo ngalesosikhathi they are oyindilinga kuya ruble. Uma ugcwalisa enjalo incwadi ebalulekile njengoba entela intela ezweni, alamukeli iyiphi kwamaphutha, ngisho izindlela zokulungisa isimo.
Kunoma ikuphi entela intela izwe akufanele libhalwe nhlangothi zombili lokuqala le phephandaba, kanye eziboshiwe - kuba, ekugcineni, kuholele Ukuwohloka ephepheni.
Ngo inqubo ukugcwalisa isimemezelo esinjalo kuyadingeka ukusebenzisa inki omnyama, blue noma purple. Yenza isimemezelo ungenziwa kuphela usonhlamvukazi ngosonhlamvukazi. Kumelwe sikhumbule ukuthi ngokuvamile ligcwele kusuka kwesokunxele kuya kwesokudla kusukela phezulu kuya phansi.
Uma esigabeni esithile simemezelo awudingi ukuba imise value, kubalulekile ukubeka udwi okungukuthi emgceni locondzile, okuyinto eyenziwa phakathi kwengqamuzana, nobude yonke yasendle obubekelwe eceleni ukugcwalisa.
Uma isimemezelo sithunyelwa anyathelisiwe, kumelwe uhambisane imingcele ethile: ifonti Courier New, futhi usayizi waso akumele idlule amaphuzu 18.
Manje amagama ambalwa mayelana isikhathi zokudalula wentela yomhlaba. Iphuzu liwukuthi kufanele zethulwe ukuze acutshungulwe kungakapheli lokuqala Februwari konyaka, kulandela isikhathi intela yisikhathi. Lokhu kushiwo esigabeni sesithathu Article 398 we Tax Code of Russia.
Uma isimemezelo sathunyelwa abathile abangebona abasebenza ngeholide, ke sizoxoxa ngosuku olulandelayo. Kukhona esinye isici: Simemetelo intela umhlaba kungenziwa eyanikezwa umkhokhintela ukuba iziphathimandla zentela, futhi kungenziwa ngokoqobo noma ngomkhulumeli.
Inqubomgomo yentela isimo
Kanjani ukuze uthole yezihambi kuya ku-intanethi
I-epistemology yi ... Epistemology ngefilosofi
Dzhermeyn Defo - umdlali umsebenzi football, eyaziwa emlandweni we-English Premier League